KPET DR6500 vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an radiography X ray aman fitaovana fitarafana RD rafitra - China HD Medical Teknolojia
Antsoy Us: + 86-311-66575023
Fitsaboina momba ny biby X ray aman fitarafana
Hafanàm-po an radiography X Ray fitarafana
Human X ray aman fitarafana
Digital X Ray fitarafana radiography
Hafanàm-po an U hiomana DR X ray fitarafana rafitra Radiography
UC sandriny DR nomerika ny ray X radiography milina fitarafana rafitra
Fandriana fisaka DR nomerika X ray aman rafitra fitaovana fitarafana radiography
Mobile DR nomerika X radiography fitaovana fitarafana ny ray rafitra
Analog X Ray fitarafana
UC sandriny DR nomerika X Radiography milina fitarafana ny ray ...
Hafanàm-po an fisaka fandriana DR X ray fitarafana Radiography hampitaovana ...
Hafanàm-po an Mobile DR X ray fitaovana fitarafana Radiography S ...
KPET DR6500 vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an radiography X ray aman rafitra fitaovana fitarafana DR
Standard famolavolana am-pandriana eny ambonin'ny isan-karazany miaraka amin'ny midadasika kokoa ny fangatahana dia mety ho an'ny rehetra fisafoana ho an'ny madinika, salantsalany sy lehibe biby. Ny avo-teknolojia ankapobeny no ampiasaina amin'ny fitaovana ambonin'ny am-pandriana, ary ny zavatra manan-mahatohitra Scratch fananana, ary dia mora ny madio. Ny levitra for mitroka X-ray dia ambany.
Ny taranaka vaovao ny lehibe haben'ny nomerika fisaka tontonana detector tsy misy splicing, ny detector amin'ny lehibe haben'ny "17 × 17" amorphous silisiôma (Pixel size: 127 μ M sy ny sary fahazoana ny fotoana: 4 ~ 6 seconds) dia dehibe amin'ny tany am-boalohany fonosana avy Korea sady efa nahavita ambaratonga mpitarika teknolojia amin'izao tontolo izao. Tsy manana fahamarinan-toerana sy ny vahaolana ambony tahan'ny ary manana ny mampiavaka avo-tsara, ho ela velona, ​​ambony fampisehoana tahan'ny vola lany tamin'izany andro izany, amin 'izany fampiasana fihaonana pitsaboana sy nanafaka ny olona tsy misy mampanahy.
Misy fototra sary fanodinana teknolojia avy any HD Medical sy ny varavarankely fanitsiana mandeha ho azy, tabataba sy ny fampihenana ny fifindran'ny mandeha ho azy mety ho tratra ao amin'ny sary. Ny sary mahery asa fikarakarana tsara indrindra maneho ny vokatry ny hatsarana, ny sivana, ary ny tabataba fampihenana.
Support Work rafitra List:
Manana ny andraikitra ho an'ny sary fahazoana, fitomboana sy ny fampihenana ny sary, fanitsiana ny sary famirapiratry ny mazava, fanitsiana ny sary kosa, sary fihodinan'ny, sary flips sy VHS fandrefesana; Ny workstation manana ny asa ny fiarovana mandeha ho azy nomaniny ho solon'izay ho an'ny sary, izay manohana fombafomba lalana tokana na roa sosona lalana; Ny Dicom3.0 fampitana sary, ny fanadihadiana, ny fanontana, ny fanontam-pirinty mety ho tratra amin'ny alalan'ny tontolo ity. DR rafitra afaka mitantana ny marary sy ny sary vaovao;
Fisaka tontonana detector Japana Toshiba, 17 '+ 17' Amorphous Silicon (FPD) césium iodide 1 voatendry
Work toerana: Technical kilasy solosaina, 2M sehatra HD lamba fotsy 1 voatendry
Software Original dehibe rindrambaiko ho an'ny biby 1 voatendry
Animal fandriana No.7 fandriana, tontonana dia afaka mifindra any amin'ny tari-dalana efatra Tube tsanganana hifindra miakatra sy midina ny herinaratra 1 voatendry
High malefaka gropy 220V, 320MA, 32KW 40-150kv Vita avy any Shina (Neusoft marika) 1 PC
Ray X Tube teboka ifantohany: 0.6 * 1.2 Tube 40-150KV malefaka. Toshiba marika 1 PC
Laser sarimihetsika pirinty Kodak 5700C 1 PC
Paper tatitra pirinty maro loko 1 PC
Filter Grid Dehibe JPI, 203 tariby, avo matevina Grid 1 SET
Efijery kasihina HD Medical 1 PC
Post-toerana ny asa fikarakarana Computer amin'ny rindrambaiko 1 SET
Remote Trolley 3KW UPS vovoka, dia afaka mihetsika miakatra sy midina.
Vata fitaovana HD Medical 1 SET
High malefaka tariby 75KV 2PCS
Power tariby Dingana roa 3wires 1 PC
Power fanamafisam-peo: Vita sinoa 1 SET
Ny hafa Fonosana baoritra, eto an-tany tariby 1 SET
Previous: KPET DR6000J vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an radiography X ray aman fitarafana rafitra DR
Next: KPET DR6500J vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an radiography X ray aman rafitra fitaovana fitarafana DR
Hafanàm-po an Radiography fitsaboina momba ny biby X-Ray Equipment
Hafanàm-po an X Ray Machine fitsaboina momba ny biby Price
Hot Selling fitsaboina momba ny biby Digital Radiography
Radiography fitsaboina momba ny biby X -Ray Equipment
Ray fitsaboina momba ny biby Digital Radiography System
fitsaboina momba ny biby-pitiliana fitarafana Table
fitsaboina momba ny biby Digital X-Ray Machine
Fitsaboina momba ny biby Flat Panel Detector
fitsaboina momba ny biby fitarafana Fitaovana
fitsaboina momba ny biby Tabel Fa X-Ray
KPET DR4500 Veterinary biby biby Hafanàm-po an-peo ...
KPET DR6500J vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an ...
KPET DR6000J vet fitsaboina momba ny biby biby biby Hafanàm-po an ...
KPET DR5500J Veterinary biby biby Radi nomerika ...
KPET DR5500 Veterinary biby biby Hafanàm-po an-peo ...
KPET DR3500 Veterinary biby biby Radi nomerika ...
HD Medical naorina tamin'ny 2000, dia avo-teknolojia vaovao, orinasa izay misahana manokana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy Ankehitriny-varotra fanompoana ho an'ny fitaovana fitarafana-pitsaboana vokatra.
Nanontany ny Price lisitry
Shijiazhuang HD Medical Teknolojia mpiara., Ltd